Adeegga online lacag la'aan ah. Kabxidda, earthworks
Xisaabinta kabxidda earthwork waayo,
si qoto dheer B
B - qoto dheer kabxidda
Y - dhererka god
X - width god
earthworks Construction - waa god aasaaska, dabaasha ama balli, ka qoday meel ku for goboleedka bulaacada guriga dalka, nidaamka bullaacadaha ama aqalada biyaha.
In abaabulka Muga kabxidda ee ciidda ka qotay ah waa mid aad u muhiim ah in si sax ah loo qiimeeyo.
Qiimaha kabxidda ka kooban kabxidda ah ka qoday ama kabxidda iyo ka saarista ee ciidda. loo baahan yahay in la qorsheeyo dhaqdhaqaaqa daaha dihnayd ee dhulka loo isticmaalo mustaqbalka beerta beerta ama khudradda. qayb Dhalma ee ciidda loo isticmaalo dheellitir site, aasaaska gogosha-celin ama waa la qaaday off-site. Meelaha qaadidda ee ciidda waxaa lagu go'aamiyaa ka hor.
Sidoo kale ogsoonow in qiimaha ee 1 mitir cubic of kabxidda inta badan waxay kordhisaa la qoto dheer ee shaqada. Tan iyo qiimaha dusha sare si qoto dheer ah 1 mitir iyo 1 mitir u qoto dheer oo kala duwanaan karaan xataa laba jeer. Lyadoo ciidda inta badan waa wax u gaar ah oo kharashka. Si aan si daran Beentoodii kharashyada lama filaan ah, farayaan wax walba oo ka hor la qandaraaslaha.
Tixgeli stock ee qadarka kabxidda loogu rakibo ee nijaarnimo markay aasaaskii shubtay.
Buugga ama dhulka qoda?
Mid kasta oo ka mid ah wajiyadii waxay leeyihiin pros iyo khasaraha.
Marka shaqeeya gacanta god la samayn karaa si sax ah.
Iyadoo ciidanka shaqada qiimaha hooseeyo iyo xaddi yar oo ah qiimaha ugu dambeeya ee wax soo saarka by kabxidda gacanta waxaa laga yaabaa in ka yar markii ay kireysanayaan dhulka qoda ah iyo mishiino kale. Si fudud si ay u hirgeliyaan gacanta ku size iyo joomateri ee yaamayska.
Si kastaba ha ahaatee, tiro aan yareyn oo ciidda iyo in xawaaraha ee dhulka qoda ah waa inta badan ku guuleystay. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka waa adiga.
Habka of earthworks.
First aad u baahan tahay si ay u xusaan meel god ah ama qoday. Si arrintan loo sameeyo, oo korka ka mid ah dhulka la biin oo xadhig khafiif ah ayaa tilmaamaya meeshii shaqada. Si loo xakameeyo joomateri ee qiyaasay laba diagonals mustaqbalka ee yaamayska - waa in ay u dhigma.
Si kastaba ha ahaatee, tani waa hab ka baxsan sharciga iyo ku haboon yahay boholo ama dhul xad guri sixitaanka.
Waayo, earthworks design badan oo sax ah u isticmaalaan farsamada ee soo socda.
At qaar ka mid ah masaafo ka kabxidda la soo jeediyay qoday posts alwaax, in kooxo laba (castoffs). Waxay u dhuujin guddiga gudban, taas oo ay xadhko ku jiid. Guddiyada isku dayaan in ay toosiyaan on mid heer kasta oo kale.
By dhaqaaqin xadhko, gaaro saxda sixitaanka. Kuwani-offs tuuray ee isticmaalka mustaqbalka iyo saxda ah nijaarnimo aasaaska strip.
Waxaa fududeeyaa heerka shaqada, theodolite, qiyaas cajalad laser ama heerka laser.
Iyada oo beerta daciif ah ama si qoto dheer badan ee kabxidda bixiso si ammaanka kabxidda fiiro gaar ah. Xaaladdan oo kale, derbiga oo ceelkii ma samayn adag toosan, laakiin eexda ah - si looga hortago Daadinta ee ciidda.
Derbiyada iyo hoose ee ay gacanta ku heer yaamayska iyo tareenka dheer oo ku filan.
Control of joomateri.
Waayo, xagal sax ah 90 digrii jiro mid soo dhaweynta. Saddex Xagalka la dhinac 3:4:5 m (ama la dhinac in ay yihiin dhufsanayaasha tirooyinkan) mid ka mid ah uu leeyahay xagal of 90 darajo. Saar hal dhinac oo xagal ee 3 mitir, oo dhinaca kale ah - 4 iyo masaafada u dhexeysa dhibcood waa in ay si sax ah 5 mitir.